Halluu fe'u, gargartoo, fi tarreewwan Hatchirgi
Halluu, Gargartoo fi tarreewwan hatchingii Fe'uu.
Halluuwwan, gargartoo yookin sarxaalee hatchingi gurnleessuuf, tarreewwan fayyadamu dandeessa. LibreOffice tarreewwan baay'ee fe'uu dandeessu fi kangalmee keeti keessatti. Yoo barbaadde,maalimoota tarree keessaa ida'uu yookin haquu yookin tarree maamilaalee uuma.
Tarree halluu fe'uuf.
Dhangii - Bal'inaa, fi itti aaansun Halluuwwan kabalaa filadhu.
Qabduu Tarree halluu fe'uuf cuqaasi.
Tarree halluu fe'u barbaadduu mul'isi, kana booda Bani cuqaasi. Faayiliin tarree halluu dhangii [maqaafaayilii].soc qaba.
Tarree halluu olkaa'uuf qabduu Tarree Halluu Olkaa'i cuqaasi maqaa faayilii galchi, kana booda Olkaa'i cuqaasi.
Jarreen GMYK halluuwwan maxxansaatiif gulaalawwa; garuu halluuwwan saphaphuu fi tarreewwan HTML keessaa, mul'ina qulqullina halluu 256 fayyadamuuf gutolaa'a.
Tarree gargartoo fe'uuf
Dhangii-Bal'inaa fili, kana booda cancala Gargartoowwani cuqaasi.
Qabduu tarree Gargartoowwani fe'i cuqaasi
Tarree gargartoo fe'uuf barbaaddu mul'isi kana booda Bani cuqaasi. Tarreen faayilii dhangii (maqaafaayilii). sog. ofkeessaa qaba.
Qabduu tarree gargartoowwani olkaa'uuf, tarree gargartoowwani Olkaa'i cuqaasi maqaa faayili galchi kana booda Olkaa'i cuqaasi.
Tarree halchiiyii fe'uuf.
Dhangii-Bal'ina fili, kana booda cancala hatchingii cuqaasi.
Qabduu Tarree Halchas fe'i clqaasi
Tarree haachoota fe'uu barbaadduu mul'isii, kana booda Bani cuqaasi. Tarreen faayilii haatchotaa dhangii [maqaafaayilii].soh qaba.
Dhangii – Bal'ina
Halatoota sararaa fi xiyyaa fe'u
Title is: Halluu fe'u, gargartoo, fi tarreewwan Hatchirgi